ILoft yesitalato esikhulu - I-Airbnb
ILoft yesitalato esikhulu
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMary Ann
UMary Ann yi-Superhost
Yakhiwe malunga ne-1906, le ndlu iphezulu edolophini yaseLincoln yalungiswa ngokupheleleyo ngayo yonke into entsha.Imigangatho emitsha yomthi oqinileyo, ifanitshala entsha, ikhitshi elitsha, ibalcony entsha yangaphandle, imibhobho emitsha, iingcingo ezintsha, yonke into entsha!Sele ndiyithethile loo nto, lonke ikhubalo eliyimbali lesi sakhiwo selitye likalika "post rock" sigciniwe kubandakanya udonga oluveziweyo lwezitena kunye nesibhakabhaka sokuqala kunye neenkuni ezisindiweyo kunye neengcango.
Eli gumbi lokulala libini, igumbi lokuhlambela eli-2 lingalala ukuya kuthi ga kwi-5. Igumbi lokulala elinenkosi linebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela labucala kunye ne-walk-in-closet.Igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezigcweleyo/ezingamawele kunye nekhabhathi.
Eli fulethi likwabonisa ikhitshi elinobungakanani obugcweleyo obubandakanya ifriji, imicrowave, stovetop kunye neoveni, kunye neekhabhathi ezigcwele isidlo sangokuhlwa, izitya kunye nezinto zokupheka.Iwasha kunye nesomisi nazo ziyafumaneka kwigumbi lokuhlala.
Ekubeni ikwi-Avenue yaseLincoln, “iSitrato esikhulu” sethu, le flethi ifumaneka ngokulula kuzo zonke iindawo eziluncedo zoluntu kunye nomgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela, iivenkile, iziko lobugcisa, iimyuziyam kunye nepaki yasekuhlaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Mary Ann
Sihlala eLincoln kufutshane, ke siyafumaneka kwiindwendwe zethu nanini na ungasifuna. Kodwa siyayihlonipha kakhulu imfihlo yeendwendwe.